Isitifiketi | I-BAODING YINGTESHENG BRISTLE NE-BRUSH MAKING CO., LTD
I-DIY Paint Brush
Inayiloni & Ipholiyesta Paint Ibhulashi
Chalk & Wax Paint Ibhulashi
Imakethe yaseNingizimu Melika
Njengoba i-YTS isiqalile endaweni yokusebenzela yomndeni ejwayelekile e-Baoding, e-Hebei e-1990, ibilokhu ibheka isitayela sokuphatha se- "Quality above all". Ekuqaleni, ibhizinisi elikhulu le-YTS kwakungukuthengisa i-bristle ebilisiwe, futhi kungekudala yaba ukuphela komhlinzeki we-Beijing Brush Factory.
Ukuze sikwazi ukuncintisana kakhudlwana, i-YTS ithole iBeijing Brush Factory nomkhiqizo wayo “i-Great Wall” ngo-2016. Kulokhu kuthengwa, i-YTS yenza enye inqubekela phambili ebonakalayo hhayi kuphela ezinkambisweni zokukhiqiza kodwa futhi nasabelweni semakethe yasekhaya.
Ku-2005, ukwethulwa kobuchwepheshe nemishini kwavumela i-YTS ukuthi ikhulise ibhizinisi layo ukupenda indawo yokuxubha. Ngawo lowo nyaka, i-YTS yasungula ikomkhulu layo — umkhiqizi eQingyuan Industrial Park, indawo esemaphethelweni edolobha laseBaoding, eHebei. Ihlala ngaphezu kwamamitha ayisikwele angama-700,000, akhiwa isitshalo sokwenza ubristuli esibilisiwe, isitshalo sokudweba intambo, umnyango wokwenza isibambo, umnyango wokwenza ibhulashi.
Ngemuva kweminyaka yokusebenza, i-GB / T 19001-2016 / ISO9001: Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ka-2015, i-GB / T 24001-2016 / ISO140001: Uhlelo lwe-2015 lwezemvelo selusunguliwe futhi seludlulise isitifiketi semikhakha eyamukelwa emhlabeni wonke i-WCA ne-SQP.
I-YTS inabasebenzi abangaphezu kuka-300, kufaka phakathi abaklami abangochwepheshe, onjiniyela. Sinekhono lokuthuthukisa izingxenye ezintsha nemikhiqizo yokuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo ehamba phambili. Siphinde sibe ukulethwa okusheshayo futhi emva-ukudayiswa service ukuthuthukisa ukuncintisana yethu. Sikhonza amakhasimende ethu ngendlela ehambisanayo futhi efike ngesikhathi. Umgomo oyinhloko we-YTS ukuthuthukisa imikhiqizo emisha ngokuqhubekayo, ukuthuthukisa ikhwalithi, ukunciphisa izindleko, nokwethula imikhiqizo ehamba phambili kumakhasimende ngentengo yokuncintisana kakhulu.
Kungani Khetha i-YTS?!
Eminyakeni engaphezu kwamashumi amathathu, "ikhwalithi ngaphezu kwakho konke" ibilokhu iqeqeshiwe emqondweni wabasebenzi. Amabhulashi ethu asezingeni eliphakeme athola ukwamukelwa okufudumele kumakhasimende emhlabeni jikelele.
I-YTS inabasebenzi abangaphezu kuka-300 abakhiqiza amabhokisi angama-20 000 kanye nezigidi ezingama-30 ngonyaka. Abakhiqizi abaningi be-YTS banolwazi olungaphezulu kwamashumi amabili eminyaka, bathatha izinto zokusetshenziswa ezinhle kakhulu baziphendule emabhulashini amahle kakhulu atholakalayo.
I-imeyili: sophia@ytsbristle.com (I-Paint Brush INFO)
I-imeyili: bourne@ytsbristle.com (IBhulashi Lolwazi Lolwazi)
Ikheli: NO.32 YUANQU ROAD, ISIFUNDA SEQINGYUAN, BAODING, HEBEI PROVINCE, CHINA